'राजा आउ देश बचाऊ' भने जस्तै अब 'ट्रम्प आउ संसारलाई बचाऊ' किन नभन्ने !? - लोकसंवाद
'राजा आउ देश बचाऊ' भने जस्तै अब 'ट्रम्प आउ संसारलाई बचाऊ' किन नभन्ने !?
राजा आउ देश बचाऊ भने जस्तै अब 'ट्रम्प आउ संसारलाई बचाऊ' भन्ने बेला आएको छ ।
यो शिर्षक देखेर कतिलाई कन्सिरीको रौं ताती सक्यो होला ।
अगाडि नपढिकन झगडा गर्न अनि यस्को प्रतिक्रिया लेख्न तम्सिसके पनि होलान् ।
तर कुरो यस्तो छ । म यस बारे अलिक व्याख्या गर्न चाहन्छु निष्पक्ष भएर एकैछिन धैर्य गरेर पढिदिनु अनुरोध पनि गर्दछु ।
सर्वप्रथम कतिले मलाई ट्रम्पको सपोर्टर भनेर फेसबुकमा आरोप लगाउँदै आएका पनि छन् । यस बारे प्रस्ट पारौं । केही महिना अगाडिसम्म मलाई ट्रम्पसँग कुनै मतलब थिएन् ।जसले जिते पनि मैले खासै चासो अनि चाख लिएको थिईन् । ट्रम्पलाई कतिले नश्लवादी (racist), जिध्दी, जुझारु, आदि इत्यादि भन्ने गरेको पनि सुनेको थिएँ । ऊ प्रति खासै लगाव या सहानुभुति भने केही पनि थिएन् ।
तर चुनावको घम्सा घम्सी चुलिंदै गए पछि केही सोच्न वाध्य पार्ने 'न्युज' र 'भ्यूज'हरु मैले पढन पाएँ । अनि मैले जे सुनें त्यो आम मानिसहरुले सुन्न पाउने भन्दा फरक सुन्ने अवसरका रुपमा लिएँ । आम मानिसले सुन्ने भनेको प्रचलित आम सञ्चारका मध्यमहरु जस्तै फेसबुक, ट्वीटर, युट्युब, गुगल, विकिपिडिया, सिएनएन, बिबिसि आदि हुन् ।
मैले चाहिँ केही फरक धारणा बनाएँ । यस कारण कि म मेरो छिट्टै प्रकाशन हुन गइरहेकाे वैकल्पिक क्यान्सर उपचार पद्धतिकाे बारेकाे पुस्तकको अनुसन्धान गर्ने सिलसिलामा केहि प्रख्यात अनि प्रतिष्ठित वैकल्पिक उपचारका डाक्टर, अनुसन्धाता, बैज्ञानिकहरुलाई 'फलो' गर्ने गर्छु ।
यी यस्ता व्यक्तित्वहरु हुन् जो आफ्नो जिउ, ज्यान, धन जे सुकै दाउमा राखेर पनि सत्यको पक्षमा बोल्ने र बुझ्ने मेराे ठम्याइ रहेकाे छ । अनि तिनीहरु सबै ट्रम्पका समर्थक रहेकाे पाएँ । कारण के रहेछ भनेर अलिक गहिराईमा बुझ्दा यस्ताे कुराे अगाडि आयाे ।
यदि याे कुरा तपाईँहरुले पनि राम्ररी मनन गर्नु भयाे भने ट्रम्पले जितोस् भन्ने चाहना राख्नु बाहेक अरु विकल्प हुँदैन । भलै हाम्रो चाहनाले केही हुनेवाला भने छैन त्यो बेग्लै कुरा हो ।
विश्वका अधिकांस जनता कोरोनाको चपेटमा परेर जिउज्यानको जोखिममा छौ‌ं । र, यो सबै हुनुमा यिनै समुहका व्यक्तिहरु दोषी छन् । अनि बाईडेनलाई समर्थन गर्नु भनेको यिनै स्वार्थी र खतरनाक समुहलाई समर्थन गर्नु हो । यहाँ सम्मकि कसैकसैको भनाई छ बाईडेनले जितेको खण्डमा ह्वाईट हाउसमा बस्ने मात्र बाईडेन हो तर उस्को पछाडिसबै निर्णय गर्ने र देश चलाउने बिल गेट्स हुनेछन् । अर्थात् बिल गेट्सलाई नै राष्ट्रपति भन्दा पनि हुन्छ ।
जो बाईडेनसँग मेरो कुनै लगाव पनि छैन दुष्मनी पनि छैन । राम्रो नराम्रो कस्तो मान्छे हो बुझेको पनि छैन र बुझ्नु पनि छैन । आफ्नै देशका नेताहरु त बुझि नसक्नु छन् भने अर्काको देशकोलाई झन के बुझिसक्नु ।
अतः मेरो बुझाई केमा केन्द्रित रह्यो भने माथि उल्लेखित नैतिकवान, प्रतिष्ठित डाक्टर, बैज्ञानिक तथा अनुसन्धाताका अनुसार बाईडेनको समर्थन गर्नेहरु प्रायः सबै मूलधारका सञ्चार माध्यम र बिग टेकहरु (CNN, BBC, The New York Times, Google, Facebook, Apple, Twitter, Amazon, Microsoft), अनि ठूला औषधी निर्माताहरु (Big Pharma) , ठूला खाद्यान्न निर्माताहरु, जेनेटिकली मोडिफाईड अग्र्यानिजम (GMO) क उत्पादक मोन्सान्टो, WHO, CDC , FDA, अरबपति समूहका बिल गेट्स, फाउचीहरु जस्ता रहेकाे पाइयाे ।
अब तपाईँहरु भन्नुहोला समर्थन गरेर के भो त ? कसै न कसैलाई त आखिर समर्थन गर्नै पर्छ । तर कुरो समर्थनकाे मात्र होईन :
सर्वप्रथम त यिनीहरुले सञ्चार माध्यमलाई यसरी कब्जा गरे कि यिनीहरूले चाहना बेगरका समाचारहरु प्रसारण हुन पाएनन् । विपक्षीहरुको आवाजलाई झन्डै झन्डै निस्तेज पारे भन्दा हुन्छ । जसअनुरुप आम मानिसले बाईडेनको बढाईँ र ट्रम्पको बदख्वाईं बाहेक अन्य केहि सुन्न र बुझ्न पाएनन् । यसकारण अरु त अरु नेपालमा समेत ट्रम्प प्रतिकाे धारणा घृणामा परिणत भयाे ।
मिडियाले एकतर्फि बाईडेनको समर्थन गरेको प्रमाण यस कुराले पनि देखाउँछ कि चुनावको वास्तविक छिनोफानो अनि निर्णय हुनु अगावै बाईडेनले जितेको घोषणा गरे । बधाई दिए । बाईडेनलाई जितको भाषण गर्न लगाए । अनि ट्रम्प र उनका पक्षधरलाई हतोत्साहित र उपहास गर्ने काम गरियाे । स्मरण रहोस् आधिकारिक घोषणा अहिलेसम्म पनि भएको छैन ।
कतिपय स्टेटहरुमा डेमोक्रयाटहरुले धाँधली गरेको आरोपमा ब्यालेट रिकाउन्टीङका मुद्दा चलिरहेको छ । यो तत्थ्य र प्रमाण विनाको खोक्रो आरोप मात्र होइन् । यसको प्रमाण स्वरुप कतिपय भिडियोहरु छन् । तर, मिडियाले यि सबै सेन्सर गरेर आम जनताले देख्न, हेर्न अनि सुन्नबाट बन्चित गराइएका छन् । उदाहरणको रुपमा यो साईटलाई फेसबुकमा हाल्नुस अनि हेर्नुस के देखाउँछ ।
फेसबुकले भन्छ :
You can't post this. This URL goes against our Community Standards on spam: brighteon.com
हाम्रो पढ्ने, बुझ्ने अनि सही गलत ठम्याउने हाम्रो अधिकारमाथिकाे निर्णय गर्ने हक फेसबुकको जुकरवर्गको पाेल्टामा कहिले देखि गयाे ?
एउटा स्वतन्त्र मुलुकमा त्यसमाथि पनि अमेरिका जस्तो देश जस्लाई स्वतन्त्रता (freedom of speech and liberty) को प्रतिक मानिन्छ । अरु देशले पनि अमेरिकालाई स्वतन्त्रताकाे पथ प्रदर्शकको रुपमा लिने गर्छन् । त्यहाँ समेत उनीहरुले अत्यधिक सेन्सरसिप गरिरहेका छन् । त्यहाँकाे प्रेस स्वतन्त्रता हनन गरिरहेका छन् । कुनै समुहले कब्जा गरिरहेकाे छ भने त्याे पक्कै पनि चिन्ताको विषय हो ।
हाम्रो देशमा पनि हामी वाक स्वतन्त्रताको कुरा गछौं । वाक स्वतन्त्रता हुनन हुन लग्यो भनेर विरोध गर्छौ, लडछौ । यो हामीले अमेरिकाबाट सिकेका हौं । आज त्यहि देशका जनताले कसरी याे कुरालाई स्वीकार गरेर बस्न सक्छन् ? त्यस्तो त हामीले कट्टर कम्युनिस्ट तथा एकतन्त्रीय तानाशाही देशहरुमा मात्र हुन्छ भन्ने सुनेका, बुझेका थियाै‌ । निश्चय पनि अमेरिकामा त्यस्ताे हुनु भनेको अमेरिका र बाँकी विश्वकाे राजनीति कता मोडिंदैछ भन्ने डरलाग्दो स्थिति हो ।
अमेरिकामा समेत सत्य बोल्नेको के हालत हुन्छ र यी माफियाहरुले के के गर्छन् ? यी महिला अनुसन्धानकर्ता वैज्ञानिकको यो भिडियो क्लिक गरेर हेरे पछि छर्लंग हुन्छ । https://kenningtonpress.com/wp-content/uploads/2020/05/plandemic-1.mp4
“If we don’t stop this now we can not only forget our republic and our freedom, but we can forget about humanity because we’ll be killed by this agenda.” —Dr. Judy Mikovits
उनी भन्छिन — यसलाई अहिले नै रोक्न सकिएन भने हामीले हाम्रो लोकतन्त्र अनि स्वतन्त्रतालाई सदाको लागी गुमाउनुपर्ने मात्र छैन, मानवता नै भुल्नु पर्ने हुन्छ किनकि यस कार्यक्रमका (षडयन्त्र) अनुसार हामी सबै मारिन समेत सक्छौं ।
र, यो सबै हुनु र गराउनुमा माथि उल्लेखित समूहको हात रहेकाे प्रष्ट छ । जसलाई चासाे छ त केवल पैसा र पावरकाे । जसले उनीहरुलाई कहिले पुगेन र पुग्दैन पनि । उनीहरुकाे नियत संसार कब्जा गर्नुमा छ । जसका लागि उनीहरु जे गर्न पनि पछि पर्दैनन् ।
चीन अमेरिकाकाे प्रतिस्पर्धी मात्र नभएर विपरित व्यवस्था प्रणाली र मूल्य मान्यताको विपरित दिशामा उभिएकाे छ । यिनीहरु पैसा र पावरको लागि चीनसँग हात मिलाउँदैछन् । उक्त समुह चिनसँग हातेमालो गर्दैछ ।
फाउची र बिल गेट्सहरुले चीनको वुहानको अनुसन्धान केन्द्रलाई आर्थिक, प्राविधिक सहयोग र सहकार्य गरेका प्रमाणहरु पनि प्रशस्तै छन् । विश्वका उत्कृष्ट वैज्ञानिकहरुले यस्तो प्रकारको अनुसन्धानहरु नगर्नु , यो खतरनाक हो भन्दा भन्दै पनि यिनीहरुले वेवास्ता गरे । यिनिहरुले कोरोनाको भविष्यवाणी पहिले नै गरिसकेका थिए अनि यसको पूर्वाभ्यास पनि गरेका थिए । अनि स्मरण रहाेस बिल गेट्सले कोरोना भाइरसको प्याटेन्ट् समेत दर्ता गराएका छन् । यो सबैले के देखाउँछ भने कोरोना भाइरसको यो महामारी आउनु र ल्याउनुमा उनीहरुको हात रहेकाे देखिन्छ ।
आज हामी विश्वका अधिकांश जनता कोरोनाको चपेटमा परेर जिउ ज्यानको जोखिममा छौ‌ं । र, यो सबै हुनुमा यिनै समूहका व्यक्तिहरु दोषी छन् । अनि बाईडेनलाई समर्थन गर्नु भनेको यिनै स्वार्थी र खतरनाक समूहलाई समर्थन गर्नु हो । यहाँ सम्मकि कसैकसैको भनाई छ बाईडेनले जितेको खण्डमा ह्वाईट हाउसमा बस्ने मात्र बाईडेन हो तर उनका पछाडि सबै निर्णय गर्ने र देश चलाउने भने बिल गेट्स हुनेछन् । अर्थात् बिल गेट्सलाई नै राष्ट्रपति भन्दा पनि हुन्छ ।
अतः जसको कारणले आज घरभित्र लुकेर बस्नु पर्ने बाध्यता बनाएको छ, लाखौ मानिसको ज्यान गएको छ उसैको समर्थन गर्न तपाईँ चाहनुहुन्छ ? आफूमाथि भईरहेको अत्याचार गर्नेलाई अझ टाउकोमा टेकाउने ? अनि त्यसैलाई समर्थन गर्ने ?
यो कुरा कतिलाई अपत्यारिलाे पनि लाग्न सक्छ । कारण ती विपक्षीले पनि यसको विरुद्धको समाचार अनि झुठो वैज्ञानिक अनुसन्धानयुक्त निष्कर्षहरू निकालिरहेका हुन्छन् । यहाँ सत्य कुन हो भनेर आम मानिसलाई छुट्याउन गाह्रो हुन्छ ।
तर, यो छुट्याउने सरल तरिका हो - त्यो अनुसन्धान गर्ने मानिस कुन समूहको हो, को सँग आवद्ध छ । कति इमान्दार र निष्पक्ष छ भन्नेमा उसको छवि अर्थात् नाम जोडिएको छ आदि ।
अमेरिकाका अधिकांश रिसर्च सेन्टर, अस्पताल, मेडिकल कलेजका वैज्ञानिक यी सबै प्राय बिल गेट्स र यी ठूला कम्पनीहरुको खल्तिमा छन्, खरिद गरिसकेका छन् । उनीहरु बिक्री समेत भइसकेका छन् ।
५जी, मोन्स्यन्टो, ईएमएफको सेफ्टि इत्यादिको पक्षमा वकालत गर्ने मानिसहरु यिनै हुन्छन् । केही निष्पक्ष, सत्यवादी अनुसन्धानकर्ता, डाक्टर, बैज्ञानिकलाई उठिबास लगाउन समेत् पछि पर्दैनन् यिनीहरु । प्राकृतिक उपचार अनि स्वतन्त्र सञ्चार (independent media) माथि प्रतिबन्ध लगाउने पनि यी र यस्तै कम्पनी नै हुन् ।
अब कुरा गरौ ट्रम्पको । होला ऊ जिद्धि, घमन्डी, ढिठ, केटी खेलाउने (womaniser), स्वास्नी कुट्ने, जातियवादी (racist), अप्रवासीहरुलाई भिसा, ग्रिन कार्ड नदिने अनि अरु पनि के के ? तर त्यो कतिपय उसको व्यक्तिगत कुरा हो भने अरु सामान्य कुरा हुन त्यसले अधिकांश मानव जातिलाई केहि फरक पर्दैन् ।
फरक त्यति बेला पर्छ जब बिल गेट्स ह्वाईट हाउसमा हावी भएर राज गर्न थाल्नेछन् । अनेक बहानामा सबैलाई भ्याक्सिन लगाउन अनि गुलाम बनाउन थाल्नेछन् । उनकाे योजना मध्ये संसारको जनसंख्या घटाउनु एउटा मूख्य हो । र, उनकाे त्यो लक्ष्यमा अधिकांश काला र अश्वेत जातीनै पर्छन् । अर्थात् त्यसमा हामी पनि पर्छौ । ह्वाईट हाउसको शक्ति अनि भ्याक्सिन र फाइभ जी (5G) को सहयोगले उनीहरुले त्यो लक्ष्य सहजै पुरा गर्न सक्छन् ।
स‌ंसारकाे जुसनुकै कुनाकाे मानिसलाई जतिबेला पनि मार्न सक्ने ल्याकत राख्छन्, त्यति बेला हाम्रो केहि लाग्ने छैन । मान्छे मर्नु र मार्नु उनीहरुका लागि नौलो कुरा पनि होईन् ।
अफ्रिका र दक्षिण भारतमा भ्याक्सिन लगाउने बहानामा धेरैलाई मारिइसकेको छ । कोरोनाको 'प्यान्डामिक' पनि उसैको षडयन्त्र हो अनि मानवजातिप्रतिको अपराध (crimes against humanity) मा उनीहरुलाई मुद्दाहाल्ने कुरा पनि चलिरहको छ ।
यहाँ 5G को पनि अलिकती व्याख्या गर्रौ । यो पनि यस्तो प्रविधि हो जसको नकारात्मक पक्ष के के हुन भन्ने यकिन भईसकेको छैन । र, निष्पक्ष र निस्वार्थी बैज्ञानिकहरुले यसको विरोध गरिरहेका छन् । यसले संसारका हरेक प्राणीहरुलाई असर गर्न सक्छ, यहाँ सम्मकि पृथ्वी नै समेत नाश हुनसक्ने अनुमान गरिएकाे छ । अन्तरिक्षमा ५०,००० देखी १ लाख सम्म 5G को स्याटालाईट स्थापित गर्ने योजना अनुसार काम भईराखेको छ जस्ले पृथ्वीको हरेका कुना काप्चा त्यसको विकिरणबाट सुरक्षित हुनसक्दैन् । तर, यो समुह जसरी पनि यसलाई स्थापित गरी छाडने अडानमा छ ।
याे स्थितिमा ट्रम्प पनि ती माथीका समुहसँग डराएको, झुकेको छैनन् । र उनीहरुको मनोमानी हुन नदिनेमा लागि परेको देखिन्छ । स्मरण रहोस WHO को कार्यशैली मन नपरेर उनले त्यसको बजेटमा रोक लगाएपछि बिल गेट्सले आफनो तर्फबाट दिने निर्णय गरेका थिए । यसले बिल गेट्स र ट्रम्प फरक फरक धारका हुन भन्ने बुझिएन र ? ट्रम्प जाे कसैदेखि डराउँदैनन् झुक्दैनन् अहिले त्यस्तै मान्छेको खाँचो छ बाईडेन जस्तो कसैको मोहोरा (rubber stamp) को होईन् ।
तसर्थ अहिलेको चुनाव पछि बाईडेन राट्रपति भएर ह्वाईट हाउसमा जानु भनेको यो व्यवस्था र यि खलनायकहरुको वर्चस्र्व सदासर्वदा कायम रहिरहनु हाे । अनि यिनीहरुलाई विस्थापित गर्ने कुनै ताकत अरुसँग हुँदैन् । अहिलेको यति दह्रो राष्ट्रपति हुँदा त यिनीहरुले अनेकौ प्रविधि र यन्त्रहरुको सहाराले धाँधली गरेर जित्ने प्रयास गरे भने एक चोटी पावरमा आईसके पछि यिनिहरुलाई कसैले हटाउन सक्ने तागत हुने छैन् ।
अब तपाईँहरुले बुझनुभयो होला मैले किन बाईडेनलाई बधाई नदिएको अनि ट्रम्पका कतिपय कमजोरीहरुको वावजुद मैले उसलाई तिरस्कार नगरेको, अथवा उप्रति सहानुभुति राखेको ।
यो कुरा बुझ्ने धेरै अमेरिकीहरु जसमध्ये भूपू आर्मीका भेटेरानहरुसमेत अहिले यि अपराधीहरुबाट हाम्रो देशलाई बचाऊ भनेर लागि परेका छन् । अनि हातहतियार उठाएर मार्न र मर्न तयार भएको अवस्थामा छन् । यहाँसम्म कि यो स्थितिमा अहिले अमेरिकामा गृहयुद्ध हुनसक्ने समेत सम्भावना छ ।
तर केही नेपालीहरु भने फ्याउरो उफ्रेझै‌ उफ्रेर बाईडेनलाई समर्थन गर्न र बधाई दिन प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् ।आफ्नो देशको राजनीति कहाँ पुगिसक्यो मतलव छैन अर्काकोमा हस्तक्षेप गर्न हतार !
यति भैसकेपछि कसप्रति सहानुभुित राख्ने हो अनि कस्लाई तिरस्कार गर्ने नेपाली जनताहरुले आफै निर्णय गर्नेछन । !
मैले बुझेको यही हो, त्यसैले म ट्रम्पले जिते हुन्थ्यो भन्ने सोचमा छु । र यस भन्दा बढि कसैले बुझेको भए मलाई सम्झाईदिनुहुन अनुरोध छ ।
अमेरिकामा अहिले यिनै अपराधिक समुहद्वारा अनिवार्य अनि जबरजस्ति भ्याक्सिन लगाउन तयारी भईरहेको छ जस्को विरुद्ध त्यहिँका कतिपय संघ, संस्था अनि मानिसहरु प्रतिकारमा उत्रिरहेका छन् ।
र ट्रम्प यसको विरोधमा छन् भने बाईडेन समर्थनमा यो हेर्नुहोस—
अतः आशा छ अब बुझ्नुभयो होला कस्ले जित्दा हामी आम मानिसहरुलाई फाईदा छ अनि कस्ले जित्दा घाटा ।
अनि यसै सिलसिलामा सत्य बोल्ने, विश्वकै उच्चतम वैज्ञानिकहरु मध्येकि एक, जुडी मिकोभिट्स माथि गरिएको अत्याचार र ज्यादती बारेको यो भिडियो हेर्नुस् जुन युट्यबले सेन्सर अर्थात ब्यान गरेको छ (जसमा कोभिड–१९ बारेको भित्रिकुरा र रहस्य समेत खुलाईएको छ) ।
गुगल, फेसबुकहरुको सेन्सरशिप अति भयो, अब निष्पक्ष अनि बिना सेन्सर गरिएको सामग्री हेर्न वा अध्ययन गर्न चाहनेहरुले गुगलको भर नगरेर यस सर्च ईन्जिनलाई डाउनलोड गर्नुसः
त्यस्तै सुरक्षित अनि गोप्य पत्राचारको निम्ति G mail, Yahoo mail, Hotmail आदि बिर्सिदिनुस, स्वीस बेस भएको यो मेल आईडी प्रयोग गर्नुस—
त्यस्तै अमेरिकि चुनाव बारे ताजा अपडेट्को लागी यो वेवपेजमा जानुहोसः
लेखक अभिनेता, निर्देशक तथा अनुसन्धानदाता हुनुहुन्छ ।